FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY ALEMANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mpiandry alemanina
Alika mpiandry alemanina madio.
Alika mpiandry ondry alemanina
Mpiandry omby Ger-man
Ny Alika Mpiandry Alemanina dia mizara tsara sy matanjaka be. Ny GSD dia manana vatana matanjaka, hozatra, somary lavalava miaraka amin'ny taolana maivana sy matevina. Ny loha dia tokony hitovy amin'ny vatany, ary ny handrina somary boribory. Mainty matetika ny orona, na izany aza, ny manga na ny aty dia mbola misy ihany indraindray, fa heverina ho lesoka ary tsy azo aseho. Mihaona ny nify amin'ny manaikitra hety mahery. Ny maso maizina dia miendrika almond, ary tsy mipoitra mihitsy. Ny sofina dia mivelatra amin'ny fotony, manondro, mahitsy ary mihodina. Ny sofin'ny alika kely ao anatin'ny enim-bolana dia mety hianjera kely. Ny rambony feno ala dia mahatratra eo ambanin'ny bazaary ary mihantona rehefa milamina ny alika. Hozatra ny tongotra sy soroka eo aloha ary matevina sy matanjaka ny feny. Ny tongotra boribory manana faladia tena mafy. Misy karazany telo ny Mpiandry Alemanina: palitao roa, palitao ary palitao lava volo. Ny palitao matetika dia avy amin'ny mainty misy tan, sable na mainty rehetra, nefa koa mety ho fotsy, manga sy aty, fa ireo loko ireo dia heverina ho lesoka araky ny fenitra rehetra. Ireo alika fotsy GSD dia ekena ho karazany misaraka amin'ny klioba sasany ary antsoina hoe izy ireo Mpiandry fotsy amerikana . Nisy loko piebald koa niseho tamina tsipika ra iray GSD izay nantsoina hoe a Mpiandry omby . Ny Panda dia fotsy 35% ny sisa tavela amin'ny loko mainty sy mainty, ary tsy manana mpiandry Alemanina fotsy amin'ny razambeny.
Matetika ampiasaina ho toy ny alika miasa, ny mpiandry ondry alemanina dia be herim-po, malina, mailo ary tsy matahotra. Faly, manoa ary mazoto mianatra. Milamina, matoky tena, matotra ary hendry. Ny GSD dia mahatoky tokoa, ary be herim-po. Tsy hieritreritra indroa momba ny fanomezana ny ainy ho an'ny fonosin'olombelona izy ireo. Manana fahaizana mianatra izy ireo. Ny mpiandry alemanina dia tia ny ho akaiky ny fianakaviany, nefa afaka mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra. Mila ny olony ity karazany ity ary tsy tokony havela hitokana mandritra ny fotoana maharitra. Mibolisatra fotsiny izy ireo rehefa mahatsapa fa ilaina izany. Matetika ampiasaina ho toy ny alika polisy, ny mpiandry ondry alemanina dia manana hery fiarovana miaro tena mafy, ary tena mahatoky amin'ny mpikarakara azy. hifanerasera ity karazany ity dia manomboka tsara amin'ny alika kely. Ny herisetra sy ny fanafihana ny olona dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanofanana. Mipoitra ny olana rehefa avelan'ny tompony hino ny alika mpitarika fonosana ny olona ary / na tsy manome ny alika ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro mila milamina izany. Mila tompona ity karazana ity manam-pahefana ara-dalàna ambonin'ilay alika amin'ny fomba milamina, fa hentitra, matoky tena ary tsy miovaova. Ny alika miorina, voalamina tsara ary voaofana dia amin'ny ankapobeny tsara amin'ny biby hafa ary tsara amin'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana. Tokony hofanina tsara amin'ny fankatoavana hatramin'ny fahazazany izy ireo. Ireo mpiandry alemanina miaraka amina tompona passive sy / na izay tsy mahafaly ny saintsika dia mety ho saro-kenatra, malahelo ary mety hatahorana hanaikitra ary hampivelatra olana miambina . Tokony ho izy ireo Ampiofanina ary nifanerasera hatramin'ny mbola kely. Ireo mpiandry alemanina dia tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza tsy handray tsara ny fifehezana henjana. Ny tompona dia mila manana rivotra manam-pahefana voajanahary amin'ny fihetsiny. Aza mitsabo an'io alika io toy ny hoe olombelona izy . mianatra instincts canine ary karakarao araka izany ny alika. Ny mpiandry ondry alemanina dia iray amin'ireo karazan-jaza mahay indrindra sy mora zahana. Miaraka amin'ity alika miasa tena mahay ity dia misy ny familiana hanana asa sy asa amin'ny fiainana ary a mpitarika fonosana tsy miova mba hanoroana azy ireo tari-dalana. Mila toerana hafa izy ireo handefasana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Tsy karazan-tsambatra iray izay ho faly mandry fotsiny manodidina ny efitranonao na mihidy ao an-tokontany. Manan-tsaina tokoa ity karazany ity ary mianatra mora foana ka nampiasaina ho toy ny alika mpiandry ondry, alika mpiambina, amin'ny asan'ny polisy, ho torolàlana ho an'ireo jamba, amin'ny asa fikarohana sy famonjena ary amin'ny miaramila. Ny Shepherd Alemanina koa dia miavaka amin'ny hetsika alika maro hafa, ao anatin'izany ny Schutzhund, ny fanarahana, ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanatanjahan-tena. Ny orony tsara dia afaka mamofoka zava-mahadomelina ary mpiditra an-tsokosoko , ary afaka mampitandrina ny mpikarakara ny fisian'ny toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany ara-potoana mba hisorohana ny fanapoahana, na ny fivoahan'ny entona ao anaty fantsona nalevina 15 metatra ambanin'ny tany. Ny Shepherd Alemanina koa dia fampisehoana malaza sy mpiara-miasa amin'ny fianakaviana.
mix mix labozy fohy alemana
Ny fiompiana tsy misy fanavakavahana dia nanjary aretina mandova toa ny dysplasia amin'ny valahana sy ny kiho, ny aretin-dra, ny olana amin'ny fandevonan-kanina, bloat , epilepsy, eczema mitaiza, keratitis (fivontosan'ny kornea), dwarfism ary allergy parasy. Matetika koa ny fivontosana fivontosana (fivontosana amin'ny loba), DM (myelitis mihena), EPI (tsy fahampiana pancreatic exocrine), ary fistula perianal ary aretin'i Von Willebrand.
Ny mpiandry Alemanina dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany malalaka farafaharatsiny.
Ny Alika Mpiandry Alemanina dia tia hetsika mavesatra, tsara kokoa raha ampiarahina amin'ny fampiofanana karazana, satria ireo alika ireo dia tena manan-tsaina ary maniry fanamby tsara. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny ankamaroan'ny mpiandry dia tia milalao baolina na Frisbee. Folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra fakana sary miaraka amina fitsangantsanganana isan'andro dia handreraka ny alikanao ary hanome azy tanjona kendrena. Na fanenjehana baolina, fisamborana Frisbee, fanofanana fankatoavana, fandraisana anjara amin'ny vondrona playine an-trondro na fitsangatsanganana / jogging lava fotsiny dia tsy maintsy vonona ianao hanome endrika fanazaran-tena isan'andro. Ny fanazaran-tena isan'andro dia tsy maintsy misy hatrany ny diabe / jogging isan'andro hanomezana fahafaham-po ny fifindra-monina alika. Raha tsy zatra miasa loatra sy / na misy olana ara-tsaina dia mety hanjary io karazana io tsy milamina sy manimba . Mahavita asa tsara indrindra amin'ny asa atao.
inona ny mastiff bandogge
Manodidina ny 13 taona.
Ity karazana ity dia mandatsaka sombim-bolo tsy tapaka ary mpantsaka mavesatra amin'ny fizaran-taona. Tokony kosehina isan'andro izy ireo raha tsy izany dia hanana volo manerana ny tranonao ianao. Ny fandroana raha tsy ilaina amin'ny fandroana dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra noho ny fihenan'ny solika. Zahao ny sofina ary alao tsy tapaka ny hombo.
amerikana bulldog 6 volana
Tany Karlsruhe, Alemana, ny Captian Max von Stephanitz sy ny mpiompy natokana dia namokatra mpiandry alemanina mpihetsiketsika sy mpankato ary tsara tarehy amin'ny alàlan'ny alika mpiompy any an-toerana lava volo sy lava volo ary alika mpiompy avy any Wurtemberg, Thurginia ary Bavaria. Natolotra tao Hanover ireo alika ireo tamin'ny taona 1882, ary ny karazany vitsy an'isa dia natolotra voalohany tany Berlin tamin'ny taona 1889. Tamin'ny volana aprily 1899 dia nanoratra alika antsoina hoe Horan i von Stephanitz tamin'ny voalohany Deutsche Schäferhunde, izay midika hoe 'Alika Mpiandry Alemanina' amin'ny teny Anglisy. Hatramin'ny 1915 dia naseho ireo karazany lava volo sy lava volo. Androany, any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny palitao fohy ihany no ekena ho an'ny tanjona fampisehoana. Ny GSD voalohany dia naseho tany Amerika tamin'ny 1907 ary ny karazany dia neken'ny AKC tamin'ny 1908. Ny Alika Mpiandry Alemanina nampiasaina tamin'ny sarimihetsika Rin-Tin-Tin sy Strongheart dia nitondra fiheverana be dia be tamin'ny karazany, ka nahatonga azy io malaza be.
GSDCA = Alika Mpiandry Aleman'i Amerika
Max the Shepherd Alemanina toy ny alika kely amin'ny 3 volana avy any Pakistan— 'Noraisiko tamin'ny namako izy tamin'izy vao iray herinandro monja'
Titan ilay alika mpiandry alemanina amin'ny 6 volana.
'Ity i Lewis, Alika Mpiandry Alemanintsika dimy taona. Izy no alika mahatoky sy be fitiavana indrindra azonao antenaina. Tiany ny mandeha an-tongotra lavitra any amin'ireo havoana onenanay any Ekosy, fa rehefa ao an-trano dia tsy mendrika mihitsy. Raha ao an-trano no hijereny am-pahalianana izay asa hatao, raha any an-jaridaina izy dia mijery antsika am-pifaliana antsika manangana ny tranontsika - nefa variana amin'ny martins sy ny sidina, na tantely !! Fony mbola tanora izy dia nanana olana tamin'ny herisetra ary namporisihina izahay handringana azy. Mazava ho azy fa tsy nikasa ny hitranga izahay ary naharitra tamin'ny fampiofanana nataony izahay. Azo tanterahina tsy misy olana izy izao rehefa any amin'ny mpitsabo biby, fa alika mpiambina tsara ihany koa manodidina ny zaridainanay sy ny tranonay. Tena reharehanay izy noho ny fandrosoana vitany tamin'ny toetrany ary satria zazalahy tsara tarehy izy. Nampiasa teknika fanofanana isan-karazany izahay, saingy nahatsapa fa nahazo torohevitra sarobidy toy izany amin'ny fitondran-tena alika avy amin'i Cesar Millan. Misaotra betsaka avy aminay roa, manana alika tsara tarehy izahay ary tianay ny manaikitra. '
'Ity i Blixem, mpiandry alemanako 5 taona, 35-kilao (77 pounds) avy any RSA KZN, alika polisy miasa. Voaofana amin'ny fankatoavana sy ny herisetra ampiasaina amin'ny fanarahan-dia ireo olona voarohirohy nitsoaka an-tongotra izy. Nomena azy ny alika tsara indrindra nandritra ny fampiofanana momba ny fankatoavana, ny herisetra ary ny fanarahan-dia. Miaraka amin'ny fiarahamonina izy ary tiany hovonoina. Ny antony manosika azy dia ny saiko manokana sy ny fotoana natokana ho azy izay nanampy tamin'ny fifamatorana akaiky ananantsika. Mahagaga ny fahalalany ny fifandraisanay. '
Akela the German Shepherd amin'ny faha-9 taonany
Ny alika mpiandry alemanina miasa amin'ny olon-dehibe amin'ny taona 1
Sary natolotry ny Vom Haus Drage Kennel & Pet Resort
Retriever volamena 2 taona
Lupo ilay mpiandry alemana efa lava volo tao anatin'ny 9 volana— jereo Lupo mitombo
Prudy the German Shepherd dia eo amin'ny 5 taona eo amin'ity sary ity ary, toy ny mahazatra, manenjika baolina tenisy.
Riza (havia) amin'ny 1 taona sy 6 volana ary Hitman (ankavanana) amin'ny 6 volana - Hitman no antsoina hoe Mpiandry omby . Izy io dia fiovan'ny loko ao amin'ny Alika Mpiandry Alemanina purebred izay mitranga ao amin'ny ra iray.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Mpiandry Alemanina
Sary Mpiandry Alemanina 1
Sary Mpiandry Alemanina 2
Sary Mpiandry Alemanina 3
Sary Mpiandry Alemanina 4
Sary Mpiandry Alemanina 5
Sary Mpiandry Alemanina 6
Sary Mpiandry Alemanina 7
Sary Mpiandry Alemanina 8
boston terrier chihuahua afangaro alika kely
eskimo / pomeranian amerikana kely indrindra